Ny Apple Watch dia hanampy ny diabeta hifehy ny glucose ao aminy .. Vaovao IPhone
Raha toa ka nanodina ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fitsaboana ireo fitaovana finday dia vao mainka hitombo ny fiatraikany amin'ireo sehatra ireo. Ny vaovao farany amin'ity resaka ity dia misy fiatraikany amin'ny Apple Watch andrasana, izay hanana fampiharana avelany ny marary diabeta dia afaka mandray fifehezana bebe kokoa amin'ny haavon'ny glucose ao anaty ra. Nanambara ny orinasa DexCom, ary omenay anao ny antsipiriany rehetra etsy ambany.
Ny orinasa DexCom dia manana sensor kely izay mamaritra ny famaritana glucose ao anaty isaky ny dimy minitra. Ny valiny dia fiolahana saika mitohy izay mampiseho amintsika ny haavon'ny siramamy mandritra ny andro, miaraka amin'ireo tendrony ambony indrindra sy ny fianjerany, ary koa ireo fandrefesana izay ao anatin'ny haavo zaka. Fampahalalana tena sarobidy ho an'ny marary sy ny dokoterany. Ity sensor DexCom kely ity dia nahazo alalana mihitsy aza ny fampiasana azy amin'ny ankizy, manomboka amin'ny roa taona, ary ialao ireo tapa-tànana manelingelina, satria maharitra hatramin'ny herinandro ny sensor. Kely loatra koa ny habeny ka tsy dia tsikaritra loatra, ary apetraka eo amin'ny kibony na, raha ny ankizy, eo ambonin'ny tampon'ny vodin-trondro.
Misaotra ny fampiharana amin'ny Apple Watch izay nambaran'i DexCom, ireo fampahalalana rehetra nalain'ny sensor dia ho tonga tsy misy tariby amin'ny Apple Watch, manana ny haavon'ny glucose amin'ny rà eo amin'ny efijenon'ny famatrehanao isaky ny mila izany ianao. Hisy ihany koa ny fampiharana mitovy amin'ny iPhone izay hahazo fampahalalana mitovy.
Lafiny iray tena lehibe manasongadina ny fidiran'ireo finday avo lenta sy ny fitafiana azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fitsaboana dia izany dia hampisy teknolojia maro hatreto lafo vidy ary tsy dia azon'ny besinimaro atao. Ohatra iray tonga lafatra ity sensor DexCom ity, izay tsy mila ilay fitaovana lafo vidy intsony izay nahazo ny vaovao ary nampiseho azy teo amin'ny efijery, satria ny iPhone na Apple Watch antsika no hikarakara azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Apple Watch dia hanampy ny diabeta hifehy ny glucose ao aminy
Jose luis alkorta lasa dia hoy izy:
Amin'ny diabeta sy amin'ny fikasana hividy APPLE WATCH dia liana amin'ny sensor DEXCOM G4PLATINUM sy ny vidin'ny sensor
Mamaly an'i José luis alkorta lasa
Martin martin dia hoy izy:
Salama, efa amidy ity fitaovana ity ary inona ny lesoka% ananan'ny fanaraha-maso? Misaotra mialoha
Valiny tamin'i Alemanina Martin
Apple dia manaparitaka tselatra ivelany ho an'ny iPhone
Ahoana ny fampihenana iTunes 12.1 ka hatramin'ny 12.0.1 amin'ny Windows sy Mac